Oromo Free Speech: Mootummaan Wayyaanee Godina Jimmaa Magaalaa Jimmaa fi Yuunibarsiitii Jimmaa Irratti Humna Poolisii Federaalaa fi Naannoo Bobbaasuun Sakkatta’insii Gaggeessa Jira
Mootummaan Wayyaanee Godina Jimmaa Magaalaa Jimmaa fi Yuunibarsiitii Jimmaa Irratti Humna Poolisii Federaalaa fi Naannoo Bobbaasuun Sakkatta’insii Gaggeessa Jira
Mudde 2,2014 Godina Jimmaa Magaalaa Jimmaa fi Yuunibarsiitii Jimmaa irratti Humna poolisii Federaalaa fi naannoo bobbaasuun sakkatta’insii guddaan Magaalaa Jimmaa irratti gaggeeffama jira.
Sochiin Warraaqsa Qeerroo Bilisummaa Oromoo haalan jabaachaa dhufuun deeggarsaa guddaa fi dhageettii guddaa uummata Oromoo biratti argachaa dhufuu fi uummatni cina dhaabbachuun mirga isaaf falmachaa jiraachuun mootummaa wayyaanee afaan qawween uummata bitaa jiruuf yaaddoo guddaa ta’uun caasaan mootummichaa waan qabee gadhiisuu dhabuun hubatama jira. Haaluma kana irraa ka’uun magaalaa Jimmaa
keessatti Mudde 2/2014 irraa eegaluun galgala galgala magaalaa Jimmaa keessatti bakkoota garaa garaatti poolisootni federaalaa fi naannoo uummata nagaan daandii irra adeemuu dhaabanii sakkata’uun daran jabaate jira.
Kana malees kutaa magaalaa Jimmaa ganda Mantinaa jedhamutti uummataa fi dargaggoota walitti qabuun olola afaan fajjeessa itti ololuuf yaaliin godhame diddaa guddaan uummatni mootummaan kun nu ajjeessa jira, ajjeechaa seeraan alaa nurratti rawwatamuuf itti nuuf gaafatamuu qaba, mirgi namummaa fi dimookiraasii nurraa sarbamee jiru nuuf kabajamuu qaba jechuun diddaa isaa jabeessuun sagaalee dheekamsaan walga’ii abbaa irree fashaleessuun qaanii guddaa itti uffisee jira.
Dargaggootnis walitti qabamuun mootummaan Waayyaanee dhukaasee nu ajjeesaa jira namootni nama ajjeesaan seeratti dhiyaachuu qabu, nuti biyya mootummaan keessa hin jirree, biyyaa seerrii keessa hin jirre keessa jirra, mirgi uummaataa kabaamuu qaba jechuun sagalee mormii guddaa utuu dhageesisanii gara mana galma isaniitti deebi’un ibsame. Ummaatni Oromoo fi jiraattootni sabaa fi sablamootni magaalaa Jimmaa keessa jiran Sochiin Qeerroon Bilisummaa Oromoo biyyatti keessatti gaggeessa jiru, socchii sirna qabeessaa fi kan bilisummaa Uummata Oromoo mirkaneessuu fi nagaa fi tasgabbii biyyattiif fidu waan ta’eef waan dandeenyu maraan deeggarasa keenya qeerroof ni gumaachina jechuun uummatni Qeerroo cina dhaabbatee mirga isaaf falmachuuf qophii ta’uu hubachiisa jira. sirna wayyaaneef bitaamaa akka hin jirrees sagalee mormii dhageesisuun mirkaneessa jira.
Posted by Oromo firee speech at 5:13 PM